Shiinaha badeecada la isku qurxiyo ee jumlada ah ee dareeraha macmalka ah ee loo yaqaan 'vegan lipstick' calaamadda khaaska ah ee soo saaraha warshadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qurxinta Iris
nuurad jilicsan oo jilicsan jumlad jilicsan oo sumad gaar ah u leh soosaaraha macmalka dabiiciga ah
Mashiinka dheecaanka matte-ka ah ayaa si aad ah u midab badan oo soo bandhigaya saameyn matte jilicsan oo jilicsan. Isla mar ahaantaana, lipstick-ga dareeraha cufan leh waxaa ku jira maaddooyin qoyan si ay u keenaan nuur iyo xiiq jilicsan si ay bushimahaagu u noqdaan kuwo dhalaalaya oo soo jiidasho leh.
Lipstick waa qurxin lagama maarmaan u ah nolol maalmeedkaaga, taas oo iftiimin karta midabka maqaarkaaga. Liiskan digaaga ah ee loo yaqaan 'matte lipstick' waxaa lagu heli karaa midabyo badan, mid walibana wuxuu ku habboon yahay midabbada maqaarka iyo qurxinta kala duwan, waad u isticmaali kartaa si fudud. Mid dooro hada oo abuur quruxdaada shaqsiyeed.
Hore: OEM wejiga aasaaska qurxinta dareeraha jumlada sumadda gaarka loo leeyahay ee vegan foundation qurxinta
Xiga: Calaamadee bushimaha dhalaalaya oo nadiif ah oo khaas ah oo iibiya lipgloss gloss vegan oo nadiif ah
nuurada la isku qurxiyo
lipstick dabiici ah u gaar ah vegan
soo saare lipstick
astaanta khaaska ah ee dheecaanka matte-ka ah
bushimaha jumlada ah
Matte ul calaamadda gaarka loo leeyahay waxay ka kooban tahay bushimaha ...
Matte dareere lipstick sumad gaar ah ka dhigi aad o ...